Home Wararka Video: Dhabancad oo ku eedeyay Farmaajo inuu ka horyimid howlaha baarlamaanka &...
Video: Dhabancad oo ku eedeyay Farmaajo inuu ka horyimid howlaha baarlamaanka & doorashada
Kusimaha Gudoomiyaha baarlamaanka federaalka Cabdisalaan Xaaji Axmed Liibaan (Dhabancad) oo fulinaya amarka Ra’iisal Wasaare Rooble ayaa dhaariyay Xidlhibaanadii lagu soo doortay Ceelwaaq.
Dhaarinta xildhibaaanada uu muranka ka taagan yahay ayaa waxa ay keentay khalalaase siyaasadeed. Waxaana muuqata in Farmaajo iyo kooxihii taageersanaa ay meelcidla ku soo dhaceeyn.
Dhabancad ayaa si dadban ugu eedeeyay Farmaajo iyo kooxaha taageersan inay ka danbeeyeen carqaladaynta geedi socodka doorashada.
Halkaan ka doowo hadalka dhacancad:
Previous articleSaciid Deni oo howlgab ka dhigay Axmad Karaash iyo khilaafkii oo cirka isku shareeray
Next articleFarmajo iyo Kooxdiisa oo Raba inay Xamar Dagaal Ka Ridaan, Sida NISA Ivo Boliiska..